कान्समा सिन्ड्रेला ऐश- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
गतवर्ष आयोजित कान्स फिल्म फेस्टिभलको रेड कार्पेटमा पर्पल लिपिस्टिकमा क्याटवाक गरेकी बलिउड नायिका ऐश्वर्या राय बच्चनको पहिलो पटक सौन्दर्यको विरोध भयो ।
अधिकांशले उनले छनोट गरेको कलरबारे टिप्पणी गर्दै नायिकालाई सुट नगरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । सोसल साइटमा कन्ट्रोभर्सी बढ्दै गएपछि ऐशले उक्त छनोट आफ्नो नभई आफू एम्बेसडर रहेको मेकअप ब्रान्डको भएकोले आफ्नो लुक्सको जश वा अपजश सबै उसैको पोल्टामा हाल्दिएर आफू उम्किएकी थिइन् ।
सुरु भयो प्रज्ञाको हीरक
सम्मानसँगै राष्ट्रिय वाङ्मय संगोष्ठी
काठमाडौं — वर्ष दिनदेखि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हीरक जयन्ती सन्दर्भ पारेर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । शनिबार पाँच दशकदेखि भाषा, साहित्य र कलामा योगदान पुर्‍याउँदै आएका १० स्रष्टालाई राजधानीमा ‘हीरक सम्मान’ दिँदै तीनदिने राष्ट्रिय वाङ्मय संगोष्ठी सुरु गर्‍यो ।
सम्मानित हुनेमा साहित्यकार तथा समालोचक प्रा.डा. तारानाथ शर्मा, संस्कृतिविद् तेजेश्वरबाबु ग्वंग:, कवि जसराज किराँती, समालोचक चुडामणि रेग्मी, साहित्यकार तथा समालोचक आनन्ददेव भट्ट, साहित्यकार दीपनारायण मिश्र, साहित्यकार एवं पत्रकार नारायणप्रसाद शर्मा, साहित्यकार एवं समालोचक रमा शर्मा, चित्रकार शंकरनाथ रिमाल र बालसाहित्यकार शान्तदास मानन्धर छन् । सम्मानितहरूलाई राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे, शताब्दी वाङ्मय पुरुष एवं संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी र साहित्यकार बैरागी काइँलाले एक लाख रुपैयाँसहितको ताम्रपत्र हस्तान्तरण गरे ।
प्रतिष्ठानको संस्थापक सदस्यमध्ये एक राष्ट्रकवि घिमिरेले प्रतिष्ठान स्थापनाका दिनहरू सम्झिए । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटासँग मिलेर प्रतिष्ठानको स्थापना र प्रचार गर्न धेरै मिहिनेत र तपस्या गरेको सम्झँदै प्रतिष्ठानले पाका स्रष्टालाई सम्मान गर्दा धेरै खुसी लागेको उनले बताए । नेपाली साहित्यलाई विश्वमाझ चिनाउन युवापुस्तालाई नेपाली साहित्यतर्फ आकर्षण गराउनुपर्ने उनको तर्क थियो । प्रतिष्ठानले समाजमा सहअस्तित्व कायम गर्नसमेत सघाएको शताब्दी पुरुष जोशीले बताए । राजधानी र मोफसलमा बसेर नेपाली भाषा–साहित्यमा निरन्तर योगदान पुर्‍याएका स्रष्टालाई सम्मान गरिएको प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले बताए । कार्यक्रममा बैरागी काइँला, उपकुलपति विष्णुविभु घिमिरे, प्राज्ञ डा. अमर गिरी, सदस्यसचिव जीवेन्द्रदेव गिरी, भारतीय नेपाली साहित्यकार डा. कविता लामा र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलगायतले धारणा राखे ।
मातृभाषासम्बन्धी पहिलो संगोष्ठी
उद्घाटन सत्रपछि शनिबारै ‘मातृभाषा साहित्य : समकालीन स्वरहरू’ विषयमा संगोष्ठी भयो । प्रतिष्ठानले मातृभाषासम्बन्धी गरेको यो पहिलो गोष्ठी हो । प्रतिष्ठानका मातृभाषा विभाग प्रमुख श्रवण मुकारुङको सभापतित्वमा नवीन चित्रकार, लोकबहादुर थापा, डा. तारामणि राई र लक्की चौधरीले मातृभाषाबारे विमर्श गरे । भाषाविद् अमृत योञ्जनले बहसलाई जोडेका थिए । २०४६ पछि नेवार साहित्यको विषयमा विविधता आएको चित्रकारले सुनाए । मगर र गुरुङ साहित्यमा प्रगतिवादी धारको प्रभाव पाइने थापामगरले दाबी गरे । गुरुङ भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने बताउँदै उनले मगर र गुरुङ भाषामा हालसम्म दुई दर्जनभन्दा जति कविता, एक दर्जन उपन्यास, डेढ दर्जन खण्डकाव्य, तीन दर्जन नाटक, फिल्म लेखिएका बताए ।
डा. राईले नेपाली भाषाको आधिपत्यले मातृभाषाहरूमा साहित्य सृजना हुन नसकेको आरोप लगाए । थारू साहित्य लेख्य नभएर कथ्य भएकोले समस्या भएको बताउँदै चौधरीले ‘स्रष्टा मर्दा उनका कृति पनि पार्थिव शरीरसँगै गाड्ने चलनले साहित्यको अभिलेख पाउन कठिन रहेको’ सुनाए । शनिबारै ‘नेपाली भाषाको आधुनिकीकरणका प्रमुख आयाम’, ‘नेपालमा बोलिने भाषाहरूको संवैधानिक स्थिति र भाषिक नीति’ बारे विमर्श गरियो । शास्त्रीय धुन, साकेला, छलिया झिझिया, तामाङ सेलो, घाटु, च्याम्बुङ, कौरा, सिङारु, धिमे, सतार, थारूलगायतका नृत्य प्रस्तुत गरिएका थिए भने अभिनेता रमेश अधिकारीले एकल प्रहसन र सुक्मित गुरुङले गीत गाइन् ।